जुन दिन ‘एक किताब’ अभियान बन्द गर्नु पर्छ, त्यस समय मेरो लक्ष्य पुरा हुन्छ – प्रेम बोहरा – HamroKatha
जुन दिन ‘एक किताब’ अभियान बन्द गर्नु पर्छ, त्यस समय मेरो लक्ष्य पुरा हुन्छ – प्रेम बोहरा
जाँचमा पास हुन स्कुलको किताब पढे पुग्छ । तर जीवनमा पास हुन कथाको किताब पढ्नु पर्ने रहेछ । संसार कस्तो छ ? यो संसारमा सफल कसरी हुने बारे बुझ्न किताब पढ्नु पर्छ ।
हाम्रो कथा २०७६ जेठ ३२ गते १६:३९
डोल्पामा जन्मे, हुर्केका प्रेम बोहरा एसएलसी परीक्षा पछि काठमाडौँ आए । काठमाडौँमा धेरै नौलो कुराहरू देखे । ठुल्ठुला भवन , व्यस्त सडक , ठुल्ठुला काम र त्यस सँग उनलाई अनौठो लागेको एक वस्तु थियो – किताब । कति धेरै किताब । धेरै विभिन्न विधाका, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय लेखकका किताब ।
डोल्पामा केवल स्कुल को किताब करले पढ्ने मान्छेले रहरले पढ्ने किताब भेटे । उनको किताब प्रति लगाव बढ्यो । लगाव बढ्दै जाँदा उनले किताब कै क्षेत्रमा कर्म गर्ने आँट गरे । यसरी सुरु भयो -शिक्षा नेपाल । र, शिक्षा नेपालको कार्यक्रम हो ‘एक किताब’ I कथाका किताबसम्म पहुँच नभएका कर्णाली भेग लगायत अन्य दुर्गमका सरकारी विद्यालयका विधार्थीहरुलाई कथाको किताब पुर्‍याउने अभियान ।
‘एक किताब’ले किताब प्रदान गर्ने तरिका पनि अनौठो छ। पहिला उनीहरू दुर्गमको स्कुलमा गएर बालबालिका लाई किताब पढ्न दिन्छन् । एउटा किताब पढी सकेपछी आफ्नो किताब साथीको किताब सँग साटेर पढ्ने अभ्यास गराइन्छ। त्यसपछि केटाकेटीले आफू आफ्नो किताब आफ्नो स्कुलमा पुस्तकालय बनाउने प्रयास स्वरूप दान ‘डोनेट ‘ गर्दछन्। अनि बल्ल बन्छ स्कुलमा पुस्तकालय । यसरी पढ्ने संस्कार का साथै सहयोगी भावना को वृद्धि पनि बालबालिकामा हुन् जान्छ।
एक किताब को अहिले को लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्म एक करोड किताब वितरण गर्ने । प्रेम चाहन्छन् कि सन् २०३० पछि बरु यो संस्था नै बन्द गर्न सकौँ। किताब पढ्ने संस्कार यसरी बसोस् कि अभिभावकले बालबालिकालाई जन्मन्दीनमा बाल कथाका किताब उपहार दिउन् । कुनै पनि सफलतालाई किताब उपहार दिएर मनाइयोस् । यसरी किताब को महत्त्व हाम्रो समाजले बुझे , यस अभियान को लक्ष्य पुरा हुन्छ I अनि यो संस्था बन्द गरिदिए पनि किताब बस्ने पढ्ने बानी भावी नेपाली पुस्तामा बसिसकेको हुन्छ ।
प्रेमले बुझेका छन् कि सबै सफल व्यक्तित्वहरूमा एउटा बानी समान छ। त्यो हो पढ्ने बानी। विश्वका सफल व्यक्तित्वको उदाहरणबाट बुझ्ने हो भने – बिल गेट्स , वारेन बफे , जेफ बेजोस जस्ता बिलियन नियर बिजनेसमेनहरु सबै नियमित किताब पढ्छन्। सुन्दा विश्वास गर्न गाह्रो होला – वारेन बफेले दैनिक ५०० पेज पढ्छन्। बराक ओबामाले हरेक वर्षको अन्त्यमा आफूले पढेका किताबहरू मध्य सबैले पढ्ने नै पर्ने किताब को लिस्ट सार्वजनिक गर्दछन् । यदि यस्ता व्यस्त व्यक्तित्वले किताब पढ्ने समय निकाल्न सक्छन भने हामीले किन नसक्नु ?
प्रेमले युट्युबमा एउटा रोचक तथ्य पाएका रहेछन् कि कुनै एक लेखकलाई एउटा किताब लेख्न करिब ५ वर्ष लाग्छ । त्यो ५ वर्ष मा किताब लेख्ने क्रममा उनेहरुको लाखौँ पैसा खर्च भएको हुन्छ। र हामीलाई ठुलो सुविधा दिएका छन् । ५ वर्षको खोज, ज्ञान, चेतना ; हामीले ५ घण्टामा प्राप्त गर्न सक्छौँ।
त्यसैले किताब पढ्नु नै यस्तो एउटा मध्यम हो जसले हामीलाई साधारण मानवबाट चेतनाशील प्राणी बनाउन सक्छ। आफ्नो जिन्दगी सबै निर्णय सोच विचार सहित लिन सक्छ। आफूलाई आफू जिन्दगीको लगाम आफ्नै हातमा लिने एउटा मध्यम हो – किताब। आफूलाई सहज , सरल, बुझेको र मान्छे बनाउने मध्यम हुन् सक्छ -एक किताब।